XOG: Guddiga maamul u sameynta gobollada dhexe oo la isku mari waayey iyo Magaca Maamulka oo MUGA loo Iclaamiyey | XOG: Guddiga maamul u sameynta gobollada dhexe oo la isku mari waayey iyo Magaca Maamulka oo MUGA loo Iclaamiyey – Latest News
« Midowga Afrika oo hakiyey ciidamo lugu waday in lugu kordhiyo kuwa AMISOM ee…
Obama welcomes move to name Iraq’s new PM »
XOG: Guddiga maamul u sameynta gobollada dhexe oo la isku mari waayey iyo Magaca Maamulka oo MUGA loo Iclaamiyey
Shirkan ayaa ahaa mid lugu doonayey beelaha degga labada gobol ee la doonayo maamulka in loo sameeyey in laga soo dhex xulo xubnaha ka shaqeynaya dhameystirka maamulka, balse qabka wax loo qeybiyey ayaa waxaa ka soo horjestay qar ka mid ah beelihii ka qeyb-galay.
Beesha Hawiye waxaa ay heshey,15-xubnood.
Beesha Mareexaan ee gobolka Galgaduud,waxaa ay heleen.3-xubnood.
Beesha Majeerteen ee Mudug degta waxaa ay heleen,2-xubnood.
Beesha Leelkase ee Mudug degta waxaa ay heleen,2-xubnood.
Beeshs Dir ee Mudug degta waxaa ay heelen,1-xubin.
Beesha Shiikhal ee Mudug degta waxaa ay heleen,1-xubin.
Beesha Carab Saalax ee Mudug degta waxaa ay heelen.1-xubin.
Isfahan waa inuu shirka ku dhammaado waxaa sabab looga dhigay labo arrimod oo kala ah,in qabaa’ilada ka socday beesha Daarood ay isaga baxeen shirka iyagoona sheegay inay caddaalada ka fogtahay qabka ay ergadu u qeybisay guddiga maamulka soo dhisaya.
Isfahan waaga ka taagan dhismaha maamulka ayaa la sheegay inay caqabad weyn nodon doonto,waxaana horay maamulka ugu soo horjestay dowladda Puntland oo ka talisa inta badan gobolka Mudug iyo Ahlu-Sunna Wal-Jameeca oo qeybo ka mid ah gobollada dhexe ku sugan.